WordPress: Unganyora Sei Mapepa Emwana (Yangu Nyowani Plugin) | Martech Zone
WordPress: Unganyora Sei Mapepa Emwana (Yangu Nyowani Plugin)
Chishanu, July 13, 2018 Chishanu, July 13, 2018 Douglas Karr
Isu takavakazve hutongi hwemasayiti evanoverengeka vedu vatengi veWordPress, uye chimwe chezvinhu zvatinoedza kuita kuronga ruzivo nemazvo. Kuti tiite izvi, isu tinowanzoda kugadzira peji tenzi uye tinosanganisira menyu iyo inongorongedza zvese mapeji ari pasi payo. Rondedzero yemapeji evana, kana subpages. Nehurombo, hapana chekuita basa kana chimiro chekuita izvi mukati meWordPress, saka takagadzira a WordPress Chinyorwa Subpages shortcode kuwedzera kune vatengi 'theme yemabasa.php faira.
Kushandisa kwakapusa nyore:
Hapana mapeji emwana
aclass - Kana iwe uchida kuisa kirasi mune yako isina kunyorerwa runyorwa, ingo pinda pano.
ifempty - Kana pasina mapeji emwana, unogona kuisa mavara. Izvi zvinouya zvinobatsira kana iri runyorwa rwemabasa ekuvhura… iwe unogona kunyora "Hapana ikozvino kuvhurika."
gutsikana - Izvi ndizvo zvirimo zvinoratidzwa pamberi peisina kunyorerwa runyorwa.
Pamusoro pezvo, kana uchida pfupiso kutsanangura peji rega rega, iyo plugin inogonesa zvinyorwa mumapeji kuitira kuti iwe ugone kugadzirisa izvo zvirimo pane peji resaiti.
Ini pakupedzisira ndakatenderedza kusundira kodhi mune plugin kuti zvive nyore kuisa nekushandisa, uye iyo Rondedzera Mwana Mapeji Shortcode plugin yakabvumidzwa neWordPress nhasi! Ndokumbirawo utore uye umise - kana iwe uchifarira ipe ongororo!
Tags: nyora mapeji emwanarondedzero subpagesBairirashortcodeWordPressWordpress plugin
TsvagaThatLead Prospector: Tsvaga uye Tsvaga Inotungamirwa Inotungamira Email Kero